Soo-saareyaasha Alaabada - Shiinaha Products Factory & Alaab-qeybiyeyaal
Waxaan bixinnaa badeecooyin fara badan oo gogo 'oo ay ku jiraan burushka nadiifinta wajiga, xoqeyaha maqaarka wajiga, sameeyaha maaskaro, burushka korontada lagu qurxiyo, fiiq-madow iyo wixii la mid ah.
Daryeelka maqaarka dabiiciga ah Mashiinka otomaatiga ah ilaa maaskaro wejiga DIY
Mashiinka Spatula wajiga wajiga Ultrasonic Maqaarka xoqe
Silikoon Xiinka Qurxinta Korontada Qotada Dheer ...
Xakamaynta Vacuum Vacuum Blackhead Xirfadlaha Xirfadlaha ah
Nuugista korontada wajiga Muuqaalka Muuqaalka Wifi Blackhea ...
Wejiga madoobaade maqaarka macsida faakiyuca ...
Manual la qaadan karo Portable Man ahama Stee ...
Kuleylka Kuleylka Korantada Hawada ee Qallalan Qaybta S ...
Ilaha Shayga Tooska ah ee Shirkad Bixinta Gaarka Loo Leeyahay Multifunc ...
Timaha shanlo Toosiyaha Qalabka Timaha Toosiyaha Burushka Korantada
5 ka mid ah 1 cusub timaha xirfadeed timaha korontada cu ...
New dhoobada dhoobada dhoobada dhoobada dhoobada madow
Khudradda khudradda maaskaro wajiga wajiga khudradda miraha ...
Korontada silikoonka korontada ku shubta xoqida ...
Gariir biyuhu Electric silikoon Maydho caday ...
Timaha Jaraha Timaha Jaraha Timaha
1. Ku raaxayso boqolaal waji-wajiga shakhsiyeed oo leh waxyaabo dabiici ah
2. Ku buuxi maaskaro wajiga 5 daqiiqo
3. Si otomaatig ah u kululey iskuna qas walaxda
4. Nidaam nadiif ah oo otomaatig ah
5. Saxan maaskaro oo tayo wanaagsan leh oo laga sameeyay ABS
6. Way fududahay in lagu shaqeeyo adoo adeegsanaya codka codka ee casriga ah & hal badhan
7. Ku qancay heerka nabadgelyada ee Yurub iyo Ameerika
Mashiinka Garka Tooska ah ee Qalabka Timaha
Noocyo kala duwan oo timo ah oo aad dooran karto, ikhtiyaarrada xakamaynta heerkulka sare: LED wuxuu soo bandhigayaa 12 heerkulbeeg oo kaladuwan, oo u dhexeeya 250 F ilaa 450 F, inuu ku siiyo xulashada iyo xakamaynta ugu weyn. Qalajiyaha burushka ayaa sidoo kale leh qufulka amniga iyo 30 -daqiiqo oo aan la ilaalin. Adiga ayaa dooran kara waxa kuugu fiican adiga iyo nooca timahaagu waa sahlan tahay inaad ku aragto muuqaalka LED-ka.
Burushka Nadiifinta Xashida alwaaxa
Waxyaabaha: Timaha dardaaran / alwaaxda, / tuubada aluminium
Waxqabadka: Nadiifi godadka maqaarka, ka qaad madoobaadka madoobaada oo nadiifi
Qaab burush: Qaab fidsan / qaab wareegsan / qaab ubax
5 ka mid ah 1 cusub timo-qabe timo xirfadle set timo koronto koronto
Nalalka LED-ka iyo heerkulka
Heerkulka 1 st 150 ° C (300 ° F)
2 heerkul sare 210 ° C (410 ° F)
Xadhigga wareega 360
Xirfadlaha 2m ee wareega qaabeynta tangle-free iyo fudud
25m xadhig koronto
Naxaas tayo sare leh oo naxaas ah ayaa la xushay.
Ku-shaqeynta korantada ayaa deggan.
amniga ayaa wanaagsan
Buugga la qaadan karo ee la qaadan karo ee korantada birta aan lahayn ee birta sanka timaha gooya
JIRKA BIRTA JOOGTADA & KHATARTA
3D CUTTER MADAXA
Burush makeup makeup aasaaska korontada
Cusub Smart makeup makeup makeup Brush habka aad u qurxiso. Madaxayaga burushka wareega ee si qumman loo shaandheeyey wuxuu keenaa isku-darka cilladaha leh ee natiijooyinka dabiiciga u eg markasta.
Madaxa buraashka tayada sare leh waxay la shaqeeyaan qurxinta aad jeceshahay.
Ugu dambeyntiina, qalab si fudud loo isticmaalo oo qurxiyo oo soo afjaraya qaladaadka qurxinta.
Codsade sixir caajis qurxiyo indhaha hooska silikoon Khatimidii Eyeshadow
3 ee 1 INDHAHA SHAROWKA EYGA: Qalabka qurxinta sixirka, 3sazes qurxinta Charmingeye.
EASYTO CODSIGO JOOJINTA CARRUURTA IYO SHARADKA EYGA: Codso qurxinta hooska indhaha si fudud oo dhakhso leh.
Burushka Dhamaadka Isku-dhafka Aasaasiga ah ee Isku-dhafan
Burushka qurxinta aasaasiga ah ee la qaadan karo
Magaca badeecada: burush makeup makeup aasaasiga ah
Waxyaabaha ugu Muhiimsan: timaha la isku qurxiyo + aluminium aluminium + xamili
Qurxinta korantada budada Puff 3D Qurxinta Qurxinta korantada
Awood: In ka yar 80mA / 3V
RPM: 12,000 rpm / min
Miisaanka Net: 50g (Qalabka Viprating Vip + 2 Puff)
Miro maaskaro maaskaro wajiga khudradda khudradda DIY maaskaro wajiga
1. 32 kumbiyuutar halkii kartoon. Qayb kasta oo ka mid ah 1.2g, wadar ahaan 38.4g
2. Xidhmada waxaa ka mid ahaa: 32pcs./1set Anti Anti Agness Wrinkle moisturizing Wrinkle P Kiniiniga
3. Waxyaabaha ay ka kooban tahay: Carrageenan, PEG-5M, tartaric acid, glucomannan, sodium carbonate, maltodextrin, sodium bicarbonate, potassium chloride.
Burushka Korantada Wejiga Nadiifinta Nadiifinta Nadiifinta Korantada ee Nadiifinta Korantada
1. Super Hygienic Soft Silicone roba ka baxsan ayaa bixisa dhaqidda ugu jilicsan uguna dabiiciga ah ee wajiga iyo duugista dhammaan noocyada maqaarka ee caadiga ah.
2. Ku hel kalsooni muuqata wajigaaga midab ka taajirsan, jilicsan, caafimaad qaba, oo dhalaalaya. Si tartiib ah uga qaad qurxinta waara, godadka qoto dheer ee nadiifka ah, ku yaree madoobaadka xoog buuxa iyo dadaalka ugu yar si aad si raaxo leh ugu iftiimin karto maqaar cusub oo dhalaalaya.
3. Qaabka oval, qaab gacan qabasho ah oo sahlaya in la maareeyo oo raaxo lagu raro. Nadiifinta wajiga oo leh halbeeg gacanta lagu hago oo fudud, marna ha u baahan inaad beddesho madaxa burushka Qalabka amarka soo-saarista xirfadeed. Lacagta oo buuxda waa 3 saacadood waxaana la isticmaali karaa 200 jeer.
4. Badeecadani waa IPX7 oo aan biyuhu xirin, waxaa loo isticmaali karaa qubayska iyo qubayska.
4 Dabaq, 3 Dhisme, Beerta Warshadaha ee Pengtengda, Lambarka 131, Huating Wadada, Dalang, Longhua Zone, Shenzhen, Guangdong, China
Right Xuquuqda daabacaadda - 2014-2021: Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay.